Ukuqeqeshwa Kwamakhono Nenkonzo - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher inikeza isevisi eningi ukusekela inqubo yakho ye-ultrasonic R&D, ubunjiniyela, ukucubungula ukuhlolwa nokusebenza kahle kanye nokusekelwa kokufaka nokuqeqeshwa kokugcinwa.
Izinhlelo ze-Hielscher nezinhlelo zokuqeqesha zigcina amakhasimende isikhathi kanye nemali. Izinketho eziningi zezinsizakalo zitholakala ngesimo sokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe zangaphakathi endlini, i-laboratory noma ukuhlolwa kwesayithi, insizakalo yobunjiniyela bokusebenza noma ukwesekwa kokufakwa. Izikhathi zokuqeqesha ze-Hielscher zinikeza ulwazi oluzodinga ukwandisa inqubo yakho ye-ultrasonic nokusebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, amakhono okuxazulula izinkinga ezivezwe kulezi zifundo azokufundisa ukuthi uhlaziye kanjani futhi usebenzise izinguquko zentuthuko yesikhathi esizayo, njengendlela yokuguqulwa komkhiqizo noma ukukala kwamandla. Ukusebenza ngokubambisana nabalingani bethu bokusabalalisa, izinsizakalo eziningi ezinsizeni zesayithi nazo ziyatholakala.
I-Hielscher inikeza ukuqeqeshwa kwe-ultrasonic ezobuchwepheshe kokubili abasabalalisi nabasebenzisi bokuphela. I-seminar eyisisekelo ye-ultrasonic yobuchwepheshe, inikeza ukuqeqeshwa kumikhiqizo ye-Hielscher, ukucubungula kwe-ultrasonic nezici ze-cavitation, izinhlelo ezivamile, ukuxazulula izinkinga nokuhlaziywa kokuhluleka. Ukuqeda ukuqeqeshwa komsebenzisi kuyatholakala futhi kuhlanganisa izihloko ezivela ekufakweni, ukuhlanganiswa kwesistimu, ukuqapha idatha kanye nokugcinwa kwemisebenzi ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwezingxenye ezithile ze-ultrasonic. Ukuqeqeshwa kanye nama-seminari anikezwa kwi-site noma e-Headquarter yase-Hielscher yaseJalimane.
I-Hielscher Ultrasonics inayo inqubo yokwelapha ifakwe amadivayisi ultrasonic, inqubo izesekeli kanye imishini analysis. Le laboratory ingashaqelwa ukuthuthukiswa nokwenza ngcono izinqubo ze-ultrasonic. Ngaphandle kwalokho, i-Hielscher ingenza ukuhlolwa kwe-sonication kwamakhemikhali oketshezi. Ukuhlanganisa ubuchwepheshe bethu obubanzi bokusebenza nezidingo zakho zokucubungula kuzoqinisekisa ukuthi isisombululo senqubo engcono kakhulu sikhethiwe kuhlelo lwakho lokusebenza.
Ngokuvamile, amadivaysi e-Hielscher ultrasonic kulula ukufaka futhi aqale. Uma ufuna ukuqinisekisa, iprosesa yakho ye-ultrasonic efakwe kahle, ochwepheshe be-Hielscher bangasiza ekufakweni nasekuqondiseni inqubo yokuqala.
Uma uhlelo lwe-ultrasonic luhluleka, isikhathi esincane sokuphendula kanye nokulungisa okusheshayo kubalulekile. I-Hielscher enkulu yokusungula ama-generators, ama-transducers nezesekeli kanye nabachwepheshe bethu abaqeqeshiwe kakhulu bangenza lokhu kwenzeke.
Izinsizakalo zobunjiniyela kanye nokwezifiso
Izicelo ezikhethekile zidinga imishini ekhethekile. I-Hielscher ine-R eyingqayizivele&I-D kanye nekhono lokubumbana ukuklama, umshini, ukukhiqiza nokuhlolwa kwamadivaysi e-ultrasonic ayenziwe ngendlela efanele kanye nezesekeli.
Sizojabula ngokusiza ekuthuthukisweni kwesicelo sakho.
Uma ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuqeqeshwa kobuchwepheshe nezinsizakalo sicela ushayele ucingo noma usebenzise ifomu elingezansi.
Ukuqeqeshwa kwe-Ultrasonic Processing
Sebenzisa i-Hielscher Process Lab
Ukuhlolwa kohlelo lokusebenza
Ukufaka futhi Qala Usizo
Amadivaysi e-Ultrasonic ngokwezifiso